राति निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यस्तो उपाय अपनाउनुहोस् | Khabar Express Tv
राति निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यस्तो उपाय अपनाउनुहोस्
खबर एक्सप्रेस २०७७-१२-१६ ०४:११ मा प्रकाशित Total Shares: 39
काठमाडौं - उमेर बढेसँगै रातिमा निदाउने तरिकामा परिवर्तन आउँदै जान्छ । ६५ प्रतिशत महिला र पुरुषहरु रातिमा निद्रा नलाग्ने र दिउँसोको समयमा निन्द्रा लाग्ने समस्याबाट पीडित भएका एक अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ । तर, किन यस्तो हुन्छ त ?